rastriyapema | May 28, 2018 | No Comments
काठमाडौं- सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ सय १६ कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले सोमवार राती जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘ आज मिति २०७५ साल जेठ १४ गते सोमबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एघारौं गणतन्त्र दिवस, २०७५ को उपलक्ष्यमा असल चालचलन भई कैदको सजाय छोट्याउन […]
लैङ्गिक हिसावले हरेक नारी पुरुषप्रति आकर्षित हुन्छे । तर यसो भन्दैमा सबै नारी हरेक पुरुषप्रति आकर्षित भैहाल्छन् भन्ने चाँहि छैन । अझ एक अध्यनले त पाँच प्रकारका पुरुषलाई महिलाले घृणा गर्ने देखाएको छ । घमण्ड देखाउनेः हुनत समाजलाई अझै पनि पुरुष प्रधान भन्ने गरिन्छ तर अहिलेका स्त्रीले आफू ठूलो हुँ भनेर रवाफ प्रस्तुत गर्ने पुरुषलाई […]
शिशु जन्मिएपछि कति दिनसम्म यौनसम्पर्क गर्नु हुँदैन ? शिशुको जन्मपछि यौनसम्पर्क गर्दा वीर्य -शुक्रकीट योनिमा झर्दा गर्भ रहन्छ कि रहँदैन ? तपाईंले भन्नुभएजस्तै धेरै दम्पतीको मनमा प्रश्न हुन्छ- शिशु जन्मिएपछि कहिलेदेखि यौनसम्पर्क पुनः सुरु गर्नहुन्छ ? सबैका लागि यति नै समय भनेर तोक्नु मनासिब नहोला। सजिलो रूपमा भन्नुपर्दा दुवैले उपयुक्त मानेपछि। कतिपयले ६ हप्तालाई यौनसम्पर्क […]
rastriyapema | May 27, 2018 | No Comments
एजेन्सी, हिन्दु धर्म र ज्योतिष शास्त्रमा पूर्णिमाको रहस्यको बारेमा निष्पादित गरिएको छ । वर्षभरमा १२ पूर्णिमा र १२ अमावस्या हुने गर्दछन् । हिन्दु पन्चांग अनुसार महिनाको ३० दिनमा चन्द्र कालको आधारमा १५-१५ दिनको २ पक्ष्ँमा बाढीएको छ । “शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष” शुक्ल पक्षको अन्तिम दिनको पूर्णिमा र कृष्ण पक्षको अन्तिम दिनलाई अमावस्या भनिन्छ […]
यदी तपाई सुरक्षित सेक्स गर्नु हुँदैन भने अब तपाई जोखिममा पर्न सक्नु हुन्छ । अर्थात् एड्स सहित यौन रोगका अन्य जोखिमहरु त यसअघि बाटै थिए नै अब सेक्सकै कारण अर्को गम्भीर खतरा समेत विश्वमा भित्रिएको तथ्य पत्ता लागेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको तटीयमुलुक ‘हवाई’मा ‘सेक्स सुपरबग’ नामक एक खतरनाक जीवाणुको दुईवटा मामिला बाहिर आएको […]
विराटनगर । ३८ क्विन्टरल सुन काण्डका मुख्य आरोपी मानिएका मोरङका चुडामणि उप्रेती गोरेले सुन तस्करीमा प्रहरी र ठूला नेताकै मिलेमतो भएको बताएका छन् । जिल्ला अदालत मोरङमा दिएको ३७ पृष्ठ लामो बयानमा उनले सुन तस्करीबारे धेरै कुरा खोल्दै आँफु केवल सामान्य ब्यीक्त भएको र सुन तस्करीमा प्रहरी र ठूला नेताकै मिलेमतो भएको भन्दै नेता र […]
काठमाडौँ, १३ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश २ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । आइतबार समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै नेकपाले संसद समेत अवरुद्ध पारेको छ । यद्यपी, एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको बहुमत छ । साथै एक स्वतन्त्र सांसद फोरममा प्रवेश […]
काठमाडौँ — रात झमक्कै भईसककेको थियो । त्यस्तै ७ बजेर १५ मिनेट गएको थियो क्यार । कलंकीबाट मलाई लोकन्थली जानुपर्ने थियो । धेरैबेर कुरेपछि मयुर यातायात आयो । म खुशी भएँ । सिण्डीकेट तोडन मद्दत गरेको मयुर यातायातको सेवा राम्रो छ भन्ने धेरैतिरबाट सुनेको थिएँ । नयाँ, ठुलो र फराकिलो बस देखेर उभिदा पनि दु:ख नहुने […]